Waa Maxay Sababta Madaxweynayaasha Afrika U Jeclaystaan Xukunka ? W/Q: Saleban Mohamed Ismail ( Baxraawi) Qaybtii 2aad: – somalilandtoday.com
Waa Maxay Sababta Madaxweynayaasha Afrika U Jeclaystaan Xukunka ? W/Q: Saleban Mohamed Ismail ( Baxraawi) Qaybtii 2aad:
Waxan halkii ka sii waydaynnaa qaybtii labaad ee mawduuca kor ku xusan:
ZINE EL ABIDINE BEN ALI (TUNISIA: 1987-2011)
Zine El Abidine Ben Ali wuxuu ahaa madaxweynaha Tunisia laga soo bilaabo 1987 ilaa 2011. Ben Ali, wuxuu qabsaday madaxweynenimada afduubka dhiigga, bil kadib markii loo magacaabay ra’iisul-wasaaraha. Waxa uu Tunisia hoggaamiyey 23 sano ka hor intii aanu ka degin January 2011 sababo la xidhiidha dibad-bax ballaadhan oo dalbaya inuu ka baxo. Wanna halkii ay ka bilaabantay dibadbaxyaddii carabta oo dhan hadheeyey ee la baxay gu’gii carabta (Arab spring). Horaantii Tunisia waxay ku naaloonaysay xasiloonida iyo barwaaqada dhaqaale oo ka dhigay dal isku filan balse hogaamintii Ben Ali ayaa noqotay mid dalkaasi u horseedday in uu noqdo gabi ahaaba gaabis dhalinyaraddii noqoto bilaa camal.Sanadkii 2012-ka, isaga oo ku jira xabsi ,waxaa lagu xukumay xabsi daa’im ah doorkii uu ku leeyahay dilalka mudaaharaadayaashii kacdoonka 2011-kii taasoo keentay inuu ka baxo awoodda. Dhibaataynta, si xun u isticmaalka dhaqaalaha dadweynaha, xakamaynta siyaasiyiinta ka soo horjeeda waa qaar ka mid ah ficiladdii galaaftay.
YAHYA JAMMEH (GAMBIA: 1994-2017)
Yaxya Jammeh ayaa awoodda ku qabsaday inqilaab aan dhiig ku daadan sannadkii 1994-tii. Jammeh intii uu xukunka hayey wuxuu qabtay dooorashooyin aan la odhan karo ciddi kulama taratamin. Wuxuna kasbaday mucaaridad dhinac walba ah ka dib doorashadii guud ee 2016-dii eek u dhawaaqadeedu muranka dhalisay wuxuu diiday in Adama Barrow, yahay madaxweynaha cusub waxana la yaab noqotay in uu ku qanci waayey guuldaraddii doorashada. Dhawr toddobaad oo uu diidanna natiijadda doorashada, wuxuu ugu dambeyntii ka tagey Gambia oo dibedda u dhoofisay wuxuu magangalyo ka helay Equatorial Guinea kadib markii cadaadis ay saareen Midowga Afrika, Ecowas, iyo Qaramada Midoobay. Muddadii 23kii sanadood xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee xoogan ayaa calaamad u ah nidaamka Yahya Jammeh, waxa kale oo sheegan jiray in uu daaweeyo cudurka AIDS-ka sidoo kale Yaxya Jammeh ma aanu jeclayn inuu arko kiniisadaha kiristanka marwalbana wuxuu ku hanjabi jiray in galbeedka afrika laga saari doonno heerka xoogaysanaya ee kiniisadaha.
Madaxweynihii laybeeriya wuxuu ahaa madaxweynihii 22 ee soo mara dalka laybeeriya ee galbeedka afrika dhaca. Charles taylor wuxuu xukumayey muddo gaaban marka loo eego madaxdii kale ee aanu soo xusnay 1997—2003.Taylor wuxuu hogaaminayey jabhaddii NPF( National Patriotic Front) waxanna lagu eedeeyey in uu gaysatay dambiyo ka dhan ah binu aadamka muddadii dagaalkii sokeeye ee dalkaas 1991 ilaa 2002 ka dibna waxa faldambiyeedyo ku heshay maxakamada dambiyada ee dagaalka ee Hague waxanay ku xukuntay 50 sanno oo xadhig ah.
Laurent Gbagbo wuxu xukunka wadanka Ivory Coast qabtay 26 October 2000ilaa laga soo gaadheyey 11 April 2011 ka dib doorashooyinkkii waddankaas ka dhacay dhamaadkii 2010kii waxa lagu tilaamaa hogaamiye kalitaliye ah oo soo maray dalkas. Muddooyin tobanaan sanadood ah wax waddankaas ka jiray dagaalo sokeeye ka dib mudadaas waxa ku dhintay dad tiradoodu ka badan tahay kumanaan. Laurent Gbagbo waxa soo xidhay maxakamada dambiyada dagaalka ee ICC dambiyada lagu soo oogay waxa ku jira xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda binu aadamka.
Madaxweynaha Burundi wuxuu xilka qabatay sanadkii 2005. waa hogaamiyaha (NCDD-FDD) National Council for the Defense of Democracy – Forces for the Defense of Democracy wuxu waddanka u maamulaa sida kalitaliyaha ilaa muddaddas in ka badan laba bilood oo mudaharaadyo lagu diidan yahay ka socdeen waxa bishii May 2015 isku day inqilaab fuliyey qaar ka mid ah saraakiil milatari xaladaas waxana ku dhintay in ka badan boqolaal qof. Pierre Nkurunziza wuxuu qabtay doorasho July 2015 kaas oo dib luugu doortay. Haddaba gabagabaddii Waxaa jira waddamo badan oo Afrikaan ah oo leh dimuqraadi firfircoon oo xor ah xitaa kali taliyayaashii hore sida oo kale Waxaa jira waddamo badan oo Afrika ah oo madaxweynayaashu ay ka tageen awood dhammaadka muddo xilleedkooda. Wadamada sida Nigeria, Tansaaniya, Ghana, Botswana, Namibia, Koonfur Afrika, Malawi, Zambia,Kenya dhamaan madaxweynuhu wuxuu ka tagay awood ka dib guuldaradii doorashadii ama dhamaadkii muddo xilleedka. Xisbiyada mucaaridka ayaa doorweyn ka qaata hanaanka isbedelada ee waddamadooda iyana waxa jira oo aanu soo qaadan karaa xisbiyo mucaarad ah oo ku guuleeystay doorashooyinkii dalalkaas ka dhacay Hogaamiyayaashii hore ee mucaaradka ee hadda awoodda ku leh Galbeedka Afrika waxa ka mid ah:
1.Patrice Talon, Benin
Ujeedada aan uga dan leeyahay qormadan waxa weeye in aan dadkayga la waddago in ay qaaradda afrika jooggan amase ay soo mareen hogaamiyayaal, madaxweynayaal, boqortooyooyin jecel xukunka iyo halka ay ku dambeeyaan. Dhamaad…
W/Q:Saleban Mohamed Ismail ( Baxraawi)
Telephone: 063-4509376 ama 063-424-328-3